Sida loo qaabeeyo martigeliye Apache dalxiis Debian | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan sii wadeynaa inaan la ciyaarno Debian adeegeena tijaabada, maanta waxaa naloo soo bandhigay baahida loo qabo in la habeeyo Martigaliyaha Virtual, sidaa darteed anigoo kaashanaya hagaha jaamacada waxaan dhisay talaabo-tallaabo ah si aan u qaabeeyo martigaliyayaasha Apache ee Debian.
1 Ku rakib apache
2 Samee feylal marti-qaade cusub
3 Sahlo faylasha martida loo yahay ee Virtual:
4 Dib u fur Apache:
5 U habee faylka martida loo yahay
Ku rakib apache
Samee feylal marti-qaade cusub
Kala soo bax feylalkayaga Virtual.conf halkan. Markaas waa inaan nuqul ka galnaa feylka virtual.conf galka galka /etc/apache2/sites-available/ ee cinwaanka cusub.
Haddii loo baahdo, waan beddeli karnaa magaca faylka. (Imtixaan ahaan waxaan u isticmaali doonnaa magaca: virtual )
Marka xigta waa inaan bedelnaa meelaha soo socda ServerName, ServerAdmin, DocumentRoot
Sahlo faylasha martida loo yahay ee Virtual:
Dib u fur Apache:
Fur faylka hosts loogu talagalay nano /etc/hosts
Kudar IP-ga cusub ee server-kaaga qeybta hoose ee feylka sida localhost.
Waxay noqon doontaa wax sidan oo kale ah:
127.0.0.1 localhost 127.0.0.10 wp 127.0.0.11 yii # Khadadka soosocda ayaa loo jecelyahay IPv6 martigaliyaal karti leh :: 1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ff02 :: 1 ip6-allnodes ff02 :: 2 ip6-allrouter
Taasna, Marti-geliyaha Virtual ee Debian si wanaagsan ayaa loo qaabeyn lahaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo qaabeeyo martigeliye Apache dalxiis oo ku yaal Debian
Salaam, subax wanaagsan
Fadlan waxaan ku weydiisanayaa casharro aad ku sharraxayso sida internetka (meel kasta oo adduunka ah) aad ku heli karto bogagga martigaliyaha iyadoo aanad adeegsan adeegyo dhinac saddexaad ah?
Xiriiriyaha Virtual.conf ma shaqeynayo.
Casharradu ma dhammaystirna 0/10
Jawaab Johan Esteban
faylka Virtual.conf mar dambe lama soo degsan karo. Fadlan cusbooneysii xiriirka.
Ku jawaab fjmadrid
Lagama heli karo dhejiska ka yimid virtual.conf. Haa, xayeysiin, buste ...
Ku jawaab Ekaitz